युट्यूबमा उपशीर्षक कसरी सक्रिय गर्ने? ➡️ ➡️ अनुयायीहरू ➡️ ➡️
YouTube मा पोस्ट गरिएको भिडियोको उपशीर्षकहरू सक्रिय गर्नुहोस् यो एकदम सीधा छ। यदि तपाइँ यसलाई कसरी गर्ने थाहा छैन भने चिन्ता नलिनुहोस्। हामी तपाईंलाई यो चाखलाग्दो उपकरणको बारेमा सबै कुरा सिकाउन जाँदैछौं जुन लोकप्रिय स्ट्रिमिंग भिडियो प्लेटफर्म समावेश गर्दछ र यसले हामीलाई अर्को भाषामा सामग्री हेर्न अनुमति दिन्छ।
YouTube मा उपशीर्षकहरू मात्र प्रस्तुत गर्दछ ती भाषाहरू बुझ्नुहोस् जुन अन्य भाषाहरूमा छन् तर ती सुनुवाई कमजोरी को लागी पनि एक असाधारण विकल्प हो। आज हामी तपाईंलाई पीसी वा एपीपीबाट यो प्रकार्य सक्रिय गर्न सब भन्दा सजिलो र सब भन्दा चाँडो मार्ग देखाउँदछौं।
YouTube मा उपशीर्षकहरू किन महत्त्वपूर्ण छन्?
धेरै प्रयोगकर्ताहरूले अझै YouTube प्लेटफर्ममा उपशीर्षकहरूको महत्त्व बुझ्दैनन्। तिनीहरू ती क्षणहरूमा उपयोगी हुन सक्दछन् जब हामी भिडियो अर्को भाषामा प्ले गर्न चाहन्छौं वा जब हामी ठूलो आवाजको साथ ठाउँमा हुन्छौं जहाँ भिडियोको अडियो सुन्न असम्भव हुन्छ।
उपशीर्षकहरू पनि गर्न सक्छन् एक उत्कृष्ट विकल्प बन्नुहोस् ती अवस्थाहरूमा जहाँ हामी आफैं स्पेसमा पाउँछौं जहाँ भिडियोहरूको आवाज उच्च आवाजमा सुन्न सकिन्न वा सुन्न हुँदैन।
कारण जेसुकै होस्, महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो युट्यूबले हामीलाई उपशीर्षकहरू सक्रिय गर्न विकल्प प्रदान गर्दछ। यो गर्ने विधि एकदम सरल र छिटो हो, र सबै भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि हामी यसलाई पीसीबाट वा मोबाइल अनुप्रयोगबाट पनि कन्फिगर गर्न सक्षम हुनेछौं।
पीसीबाट उपशीर्षकहरू सक्रिय गर्नुहोस्
हाम्रो कम्प्युटरबाट युट्यूबमा उपशीर्षकहरू सक्रिय गर्न हामीलाई केवल इन्टरनेट जडानको साथ कम्प्युटर चाहिन्छ। अन्य अनुप्रयोगहरू वा प्रोग्रामहरू डाउनलोड गर्न आवश्यक पर्दैन। यहाँ दिइएका चरणहरू:
खोल्नुहोस् प्रविष्ट गरेर तपाईंको पीसी ब्राउजरबाट युट्यूब youtube.com
Busca तपाईंले खेल्न चाहानुभएको भिडियो
आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् "सेटअप"त्यो प्लेब्याक विन्डोको तल देखा पर्दछ।
छनौट गर्नुहोस् भाषा अनुसार सबै भन्दा सुविधाजनक
तयार। भिडियो अब उपशीर्षकहरू खोल्नेछ
चाहेको अवस्थामा उपशीर्षकहरू बन्द गर्नुहोस् भिडियोमा तपाईंले माथि वर्णन गरिएका प्रत्येक चरणहरू दोहोर्याउनु पर्छ र "उपशीर्षकहरू" बक्स अनचेक गर्नुहोस्।
आईओएस उपकरणबाट उपशीर्षकहरू खोल्नुहोस्
आईओएस उपकरणबाट उपशीर्षकहरू सक्रिय गर्ने विधि पनि धेरै सरल छ। यदि तपाइँ अझै पनी यो कसरी गर्ने थाहा छैन भने, चरण pay मा ध्यान दिनुहोस् ध्यान दिनुहोस् कि तपाइँ पछ्याउनु पर्छ:
खोल्नुहोस् तपाईको आईओएस उपकरणमा यूट्यूब
स्थानहरू र तपाइँको मनपर्ने भिडियो प्ले
क्लिक गर्नुहोस् स्क्रीनको माथिल्लो दायाँ कुनामा देखा पर्ने तीन ठाडो थोप्लाहरू माथि।
मा क्लिक गर्नुहोस् उपशीर्षक विकल्पहरू (CC) र भाषा अनुसार सबै भन्दा सुविधाजनक चयन गर्नुहोस्।
एन्ड्रोइड अनुप्रयोगबाट उपशीर्षकहरू सक्रिय गर्नुहोस्
YouTube मोबाइल अनुप्रयोगबाट एन्ड्रोइडका लागि कुनै पनि भिडियोको उपशीर्षकहरू सक्रिय गर्न पनि सम्भव छ:
खोज र पुन: उत्पन्न गर्नुहोस् तपाईंको प्राथमिकता को भिडियो
क्लिक गर्नुहोस् तीन ठाडो पोइन्ट माथि (माथिल्लो दायाँ कुना)
विकल्प छान्नुहोस् “Subtítulos"
1 YouTube मा उपशीर्षकहरू किन महत्त्वपूर्ण छन्?
2 पीसीबाट उपशीर्षकहरू सक्रिय गर्नुहोस्
3 आईओएस उपकरणबाट उपशीर्षकहरू खोल्नुहोस्
4 एन्ड्रोइड अनुप्रयोगबाट उपशीर्षकहरू सक्रिय गर्नुहोस्
युट्यूबको लागि ब्यानर कसरी बनाउने?